module / အင်တင်နာ CPU ကိုကတ် Module, embedded DESFire Card ကို Module, ISO14443A/B ISO15693 Multi-protocol Module, အနိမ့်ပါဝါ 15693 module, Postage Stamps Hole Multi-protocol IC Module, တံဆိပ်ခေါင်း Hole Multi-protocol ကို IC Module
Support ISO14443 TypeA/TypeB, ISO15693 Multi-protocol, အနိမ့်ပါဝါစားသုံးမှု, high compatibility.
ပံ့ပိုးမှုသဘောတူညီချက်: ISO14443A / B,,ISO15693
Baud မှုနှုန်း: optional ကို, default အ 9600Bit / S က
ပံ့ပိုးမှုကဒ်အမျိုးအစားများ: MIFARE S50, MIFARE S70, Ultralight, UltralightC, အများစုမှာစီးရီး, ငါကုတ် SLIX, ငါကုတ် SLIS, ငါကုတ်2နှင့်သဟဇာတကတ်များ, MIFARE Desfire, MIFARE Plus အား, SONY Felica, စသည်တို့ကို.
ဆက်သွယ်ရေးအင်တာဖေ့စ: အမှတ်စဉ်ဆိပ်ကမ်းကို TTL, တံဆိပ်ခေါင်းအပေါက်အကွာ 2.0mm
အလုပ်လုပ်ဗို့: DC က 5V သို့မဟုတ် 3.3V optional ကို
အလုပ်လုပ်လက်ရှိ: < 30Ma
Card ကိုစာဖတ်ခြင်းအကွာအဝေး(CR80 ကဒ်): > 5စင်တီမီတာ
အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -30℃ ~ + 80 ℃
module အရွယ်အစား: 14.8မီလီမီတာ× 25mm, အင်တင်နာကို 30 × 45mm ခွဲ (dual-အင်တင်နာကိုထောက်ပံ့)
The postage stamps hole IC module isanewly developed product of Seabreeze Smart Card Co.,Ltd. It supports ISO14443A/B and ISO15693 multi-protocol. It features low power consumption. It is suitable for project such as access control, တက်ရောက်သူ, ပိုင်ဆိုင်မှုခြေရာခံခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှု, ဘတ်စ်ကားကဒ်, prepaid card and One Card Solution development.
I am interested in your product Stamp Hole Multi-protocol IC Module, အနိမ့်ပါဝါ 15693 module, embedded DESFire Card ကို Module, CPU ကိုကတ် Module
prev: 70စင်တီမီတာရှည်အဝေးသင်တိရိစ္ဆာန် Tag ကိုဖတ် Write Module, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စီမံခန့်ခွဲမှု Tag ကိုဖတ် Module
နောက်တစ်ခု: ISO15693 Protocol ကိုမြင့်ပါဝါ Long-အကွာအဝေး Multi-အင်တင်နာ 4-ရုပ်သံလိုင်း Motherboard